28 / 04 / 2020 30 / 04 / 2020 ဂရေဟမ် 12829 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, ၇၆၃၈၆ Hogwarts လိုအပ်ချက်အခန်း, 75967 တားမြစ်ထားသောသစ်တော: Umbridge ၏ကြုံတွေ့ရ, 759684Privet Drive ကို, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင်, ၇၅၉၇၉ Hedwig, 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ
အဆိုပါ Lego Group နှင့် Warner Bros. Consumer ထုတ်ကုန်များသည်လှိုင်းသစ်တစ်ခုကြေညာခဲ့သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံ။
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ပရိတ်သတ်တွေမှာကြည့်ရနိုင်သည် အသစ်အစုံ ကြောင်း p အဖြစ်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်art ဆောင်ပုဒ်ရဲ့နွေရာသီလှိုင်း၏။ The အသစ်အစုံ ထံမှကြိုတင်မှာယူမှုမှမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် LEGO.com theyပြီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်၊ သူတို့သည်ယူကေတွင်ဇွန်လ ၁ ရက်နှင့်ယူအက်စ်တွင်သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပြန်လွတ်လာသည်။
ယူအက်စ်တွင် 75980 အဆိုပါ Burrow အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု တစ် ဦး ပစ်မှတ်သီးသန့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤတွင်များ၏စာရင်းဖြစ်ပါတယ် အသစ်အစုံ တရားဝင်ထုတ်ကုန်ပုံများနှင့်ဖော်ပြချက်များနှင့်အတူ:
လိုအပ်သောအခန်းသို့ဝှက်ထားသောအဝင်ဝကိုဖွင့ ်၍ ဆက်သွယ်ပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione Granger နှင့် Luna Lovegood တို့သည်အမှောင်ထုမှလျှို့ဝှက်ကာကွယ်ရေးအတွက် Artလေ့ကျင့်ပါ
အသေးစားပုံများ: ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione Granger နှင့် Luna Lovegood ။
ပါမောက္ခအမ်ဘရစ်ကိုတားမြစ်ထားသောသစ်တောထဲဝင်ပြီးလှောင်ပြောင်ပါ။ သူ့ကို Grawp နှင့် centaurs အနည်းငယ်နှင့်မိတ်ဆက်ပါ။
အသေးစားပုံများ: ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione Granger နှင့် Dolores Umbridge ။
Dursley မိသားစု၏အိမ်ဖြစ်သော4Privet Drive ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။
အသေးစားပုံများ: ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley နှင့် Dobby ။
Potions Master Horace Slughorn ၏စာသင်ခန်းနှင့်ရုံးခန်းသို့လည်ပတ်ပါ၊ ဖန်လုံအိမ်ရှိမှော်ဆန်သောအနုဆေးရောင်ချောင်းကိုစစ်ဆေးပြီး Ravenclaw အဆောင်နှင့်အေးမြသောနက္ခတ္တဗေဒပစ္စည်းကိရိယာများကိုလေ့လာပါ။
အသေးစားပုံများ: ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione Granger, Horace Slughorn, Luna Lovegood၊ နဗီးလ် Longbottom၊ Ron Weasley, Lavender Brown နှင့် Draco Malfoy
မှော်စရိုက်နှင့်လှပသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော Hedwig ကိုဖမ်းယူပါ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Barnes နှင့် Noble နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များမှသီးသန့်ရရှိနိုင်သည်။
(အယ်ဒီတာ၏မှတ်စု - Brick Fanatics ဒီပစ္စည်းကို London Toy Fair မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရပြီး၊ ပြသခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ဟာအပြီးသတ်မဖြစ်သော်လည်းသူဟာသေတ္တာပေါ်ကလူတွေထက်ပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ art.)
အရောင်အသွေးစုံသောအရောင်အသွေးရှိသော Weasley အိမ်နှင့်ဟယ်ရီ၊ ရွန်နှင့်အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်၎င်းကိုသေစားစားသူများမှကာကွယ်ရန်ကူညီပါ။
အသေးစားပုံများ: ရွန်၊ ဂျင်နီ ArtHur နှင့် Molly Weasley၊ Nymphadora Tonks၊ Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback နှင့် ဟယ်ရီပေါ်တာ.
“ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့ကရုပ်ရှင်တွေထဲကစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုအချို့ကိုဖန်တီးရန်အခွင့်အရေးရရှိသည်။ ဤထုတ်ကုန်အသစ်များသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူငယ်များကို Wizarding World ရှိသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားခန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုယုံကြည်ရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူငယ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ Lego ခဲဒီဇိုင်းခဲမားကို့စ Bessa ။
← LEGO DC Super Heroes ၇၆၁၅၇ Wonder Woman vs Cheetah ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ
LEGO Harry Potter အသစ်များအတွက်ယူကေဈေးနှုန်းများကိုအတည်ပြုခဲ့သည် →